Banky BOA Madagasikara : tafakatra 55 miliara Ar ny vokatra hita izao | NewsMada
Banky BOA Madagasikara : tafakatra 55 miliara Ar ny vokatra hita izao
Bank of Africa na ny BOA. Banky iray lehibe eto Madagasikara nisokatra nanomboka ny taona 1999, rehefa nandray ny toeran’ny Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra na ny BTM. Ankehitriny, voatendry hiasa any Mali ny tale jeneraly Abdallah Ikched, ary mandimby azy amin’izany toerana izany, Alaoui, izay tale jeneraly lefitra teo aloha ihany.
Nanomboka ny taona 2012, niasa tao amin’ny BOA Madagasikara, i Abdallah Ikched, nitana ny toerana maha tale jeneraly ny fiandohan’ny taona 2014. Nikatsaka mandrakariva ny tombontsoan’ity BOA ity io mpiandraikitra io, izay manana traikefa rahateo momba ny fitantanan-draharaha ao amin’ny banky. Porofon’izany ny fitomboan’ny petra-bola ao aminy, raha 260.000 tamin’ny fotoana nandraisany azy, tafakatra 600.000 mahery izao.
Ankoatra ireo olon-tsotra manana petra-bola ao aminy, eo ihany koa ireo orinasa madinika sy salantsalany. Manoloana izany, ny fanavaozana ny fomba fiasa sy ireo fitaovana fampiasa, manaraka ny vanim-potoana. Tafakatra 55 miliara Ar ny vokatra hita izao, na ny tombombarotra raha 22 miliara Ar izany teo aloha. Voalohan-daharana eto an-toerana ny BOA, manana masoivoho 90. Koa ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra ny tale jeneraly teo aloha, notoloran’ny fanjakana mari-pankasitrahana “commandeur de l’ordre national” ny tenany, noho ny fandraisany anjara lehibe amin’ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena.
Mandray ny toerany amin’ny maha tale jeneraly vaovao azy kosa, Alaoui, telo taona efa niasana eto an-toerana. Marihina fa mbola ambany dia ambany …ny fampiasan’ny Malagasy banky. Eo ny antony tsy fahazarana na ho an’ireo manam-bola aza, fa ny antony lehibe indrindra ny tahan’ny fahantrana ambony. Koa hanampy betsaka ny tale jeneraly vaovao ny traikefa hitany tamina fitetezana faritra maro eto amin’ny Nosy, antony nanomezana toky azy amin’izao andraikitra vaovao sahaniny izao.